Yaa ka dambeeya Khilaafka Gudiga Doorashadda? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa ka dambeeya Khilaafka Gudiga Doorashadda?
Madaama doorashadu tahay mid dadban, waxay madaxda maamullada doonayaan inay kaalin ku lahaadaan soo xulista ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xog Keydmedia Online heshay ayaa sheegaysa in qaar kamid ah Madaxda Maamul Goboleedyada ay ka dambeeyaan Khilaafka cusub ee Xubnaha Gudiyadda Heer Federaalka ee Hirgelinta Doorashooyinka Soomaaliya [FEIT].
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa abuuray kala qeyb-sanaaanta kadib markii ay ku cadaadiyeen xubnaha Puntland iyo Jubbaland ugu jira Gudiga inay soo saareey habraaca doorashadda Aqalka Hoose, iyadoo siinaya madaxda awood ay kaalin ugu yeelanayaan soo xulista ergooyinka dooranaya Xildhibaanada.
Gudoomiyaha Gudiga Maxamed Xasan Cirro ayaa xaqiijiyay faragelinta, isagoo ka gaabsaday magacyada Madaxda Maamullada ay ka dambeeya khilaafka, wuxuuna ku baaqey in la joojiyo, maadaama ay dhaawacayso madax-banaanida iyo hufnaanta Gudiga.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa soo saarey xubno saaxiib la ah doorashadda Aqalka Sare, iyagoo meesha ka saarey Musharixiinta Villa Somalia, maadaama uu dagaal siyaasadeed kala dhaxeeyo Farmaajo oo dib u doorasho raadinayo.
Warar ayaa sheegaya in Deni uu Musharax yahay, islamarkaana uu rabo inuu u tartamo xilka Madaxweynaha Soomaaliya, marka si uu u guuleysto wuxuu ka shaqeynayaa inuu soo saaro Xildhibaano u codeeya, waxuuna taageero ka heystaa Axmed Madoobe.
Kuraasta Aqalka Hoose oo ka kooban 275 ayaa loogu jiraa tartan adag dhinacyada Mucaaradka iyo dowladda, iyadoo laga casbi qabo inay lamid noqoto mida Aqalka Sare, oo musuq-maasuq iyo nin jeclaysi badan ka jiraan.